Android Q Dark Mode mivoaka amin'ny horonan-tsary; asa hafa koa | Androidsis
Misy antsipiriany misimisy momba ny Android Q tsy sarona: maody maizina sy fiasa mahafinaritra hafa [Video]
Android Q no ho ny kinova amin'ny Google OS ho an'ny telefaona mahomby Android Pie. Raha izany, dia ho tonga amin'ny zavatra tsara kokoa izay mbola hosedraina isika.
Mbola tsy fantatsika izay hantsoina Android 10, fa noho ny horonan-tsary azo ampiharina amin'ilay kinova tafaporitsaka voalohany, nataon'ny XDA-Developers, afaka mandray jereo ny sasany amin'ireo fanatsarana izay ho tafiditra amin'ity famoahana ity.
Android Q dia hanana ny maody maody andrasana- Ilaina izy io ho an'izay rehetra manana finday avo lenta miaraka amin'ny efijery OLED ary te-hitsitsy angovo, ary tsy ho reraka ny masony amin'ny alina noho ireo loko maizina kokoa.
Mba hampiasana ny maody maizimaizina vaovao, ny mpampiasa rehetra dia mila mankany amin'ny menio Display Settings ary paompy Set Dark Mode. Raha vantany vao afaka, Ny maody maizina ao amin'ny Android Q dia hamono ny UI. Hivadika volondavenona mainty ny singa fotsy ary hisy aza ny singa sasany, toy ny fampandrenesana sy ny tontonana toggle, izay ho lasa mainty. Na ny fampiharana tsy manohana ny maody maizina aza dia ho mifanaraka amin'ilay endrika vaovao.
Miseho ihany koa ny fananganana Android Q fanatsarana ny fiainana manokana sy fiarovana miaraka amin'ny menio fahazoan-dàlana nohavaozina izay hamela hanamarina ny fahazoan-dàlan'ny rindranasa tsirairay avy mivantana avy amin'ny sehatra sy hametra ny fahazoan-dàlana rehefa misokatra ny fampiharana. Ny fampahalalana momba ny alàlan'ny fampiharana dia haseho ao amin'ny tabilao fampandrenesana raha ilaina.
Safidy fiarovana roa lehibe ihany koa no nampiana: ny fotoana handraisana andraikitra sy ny fotoana hamakiana, izay hamela anao hametraka hoe hafiriana ireo hafatra izay mangataka ny mpampiasa hanao zavatra no haseho ary ireo fampandrenesana izay tsy mila hetsika eo noho eo.
Ankoatra izany, hisy ny maody birao, fanohanana am-baravarankely maimaim-poana (mamela ny fikandrana hamoaka rindrambaiko maro amin'ny alàlan'ny fikasihana azy ireo), rafitra firaketana an-tsoratra ary fonosana fanavaozana lalao vaovao ahafahan'ny mpampiasa misafidy mpamily sary samirery.
Farany fa tsy latsa-danja amin'izay, Android Q dia hanolotra fiasa hamonoana ireo sensor ary toerana fanidiana hidin-trano roa vaovao hitazomana ny telefaoninao ho lava kokoa rehefa eo akaikin'ny fitaovana atokisana ianao ary hanidy azy ho azy rehefa esorina amin'ny tambajotra itokisana izany fitaovana izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Misy antsipiriany misimisy momba ny Android Q tsy sarona: maody maizina sy fiasa mahafinaritra hafa [Video]